Ukulungisa yezandla zabo. Indlela usimende izindonga
Noma yimuphi ukulungisa iqala ukuqondanisa izindonga kanye yokuqedela anolaka, okubandakanya ukusetshenziswa abaluphahleka noma okwakhiwa ngalo la mabhodi evele, nezindawo ezimanzi gipsovolokna, uphawu yamathebhu ufa futhi kokuqeda Shpatlevanie. Indlela ukucacisa maholoholo izindonga? Enough ukuze nenze udonga okhunini, ninake lezo zindawo lapho asisho uthinte udonga. Lapho ibanga ingaphezu 5 cm, kuba abaluphahleka kunesidingo. Uma kunodonga engalingani kakhulu, kungcono ivale phansi amaphepha okwakhiwa ngalo la mabhodi, lokhu ngeke ugweme umsebenzi ezingcolile kakhulu futhi kunzima, esimweni esifanayo uma udinga ukushintsha kancane, wenze usimende. Ukuze operation usebenzisa noma usimende-isihlabathi esigqulweni, noma kakhonkolo ingxube. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi enamathela usimende aluthembekile kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni lapho udonga ngaphansi vibration. Ngakho-ke, isetshenziswa njengoba umthetho kuphela evele of Gypsum futhi kokuqeda.
Indlela usimende izindonga? Umsebenzi eyenziwa ngezigaba ezintathu.
1. Okusobala nokulungiselela. Umsebenzi kufanele kuqale nokukhishwa ezinengilazi ubudala, aqhephukile usimende. On bushelelezi ukhonkolo izindonga ukwenza namantombazane ukunikeza adhesion kangcono ikhambi udonga. Khona-ke, usehlanziwe izintuli nokungcola Kwamanzi primed necebo ekhethekile, omisiwe. Ngaphambi kokufaka isicelo ingxube isihlabathi-usimende oswakanyiswe amanzi udonga ukuze avimbele ukuvuvukala kungenzeka umgwengwezi.
2. Kulungiselelwa usimende. Ngokuhambisana imiyalelo iphakethe wayixova isixazululo. Uma umsebenzi kuyadingeka ezindaweni ezinkulu, ezindongeni Abaqondisi pre igcwele planochki lokhuni elizobeka indiza wayefisa isembozo, futhi uyophinde ukuvimbela kunokwenzeka isixazululo delamination. Esikhundleni emapheshana lisetshenziswa njengedivaysi ngishiswa.
Isisombululo lokuqala 'uphonse "amakhekhe odongeni ibanga kusuka komunye nomunye we-50 cm. Ngemva ukuqondanisa umthetho (isiqeshana eside ngokhuni) owenziwa ngasogangeni, futhi ukucacisa ungqimba ukushuba esifanele, amabhikhoni omisiwe. Ngemva kwalokho, ungqimba usimende sisetshenziswa, okufanele kancane mkhulu. Ukuze luthi alufane angawi off phakathi omiswe, Uhlonze lwalo kumele singeqi 2-3 cm. Uma kunesidingo, kungcono ukubeka eziningana izingqimba ezondile usimende, ngamunye prosushivaya pre.
3. Ngemva kwamahora ambalwa enze isicelo ikhambi amathuluzi akhethekile (spatula ezibanzi) ekhiqizwa grout ebusweni ahambelana amaphutha kungenzeka futhi semfene.
Indlela ayibhade izindonga ngezitini?
Ubuchwepheshe abaluphahleka izindonga ngezitini enezinto eziningi izici. Okokuqala, akufanele sisebenzise ijazi yokululama ku wokwakha fresh, njengoba ngempela ngeke shwabanisa, futhi odongeni ngeke inqamuke. Okwesibili, lemva isitini izindonga badinga kuphela yokugcizelela anezikhala, okuvumela lula bushelelezi kwamanzi. Lelithebuli sisiba phezu ungqimba ngaphambili isicelo solution, it is sicindezelwe zibe armature yomiswa kahle. Kungaleso sikhathi kuphela lapho wenza abaluphahleka umsebenzi: kokufaka Umhlahlandlela komzila, beacons, ukusebenzisa ungqimba kasimende-isihlabathi ingxube.
Indlela usimende izindonga kakhonkolo Ukwakheka?
Gypsum usimende isixazululo ngokuvamile esetshenziselwa kokuqeda ka abaluphahleka noma Gypsum amabhodi kumagumbi emanzi. Isici nobuntu it - kuyinto kulungiselelwa okusheshayo, ngakho ukwakheka buhlanjululwe futhi isicelo izingxenyana ezincane. Kungcono ukusebenzisa indlela sishaye odongeni yokululama olwengeziwe. I ukujiya ungqimba akufanele kube ngaphezu kuka 1.5 cm 2.
Indlela usimende izindonga zokuhlobisa plasters?
usimende ukwakhiwa Special lime-isihlabathi, base itshe noma terrazitovye isetshenziselwe kuphela udonga zokuhlobisa noma ophahleni. Uzisebenzise kakhulu ukumane, lokhu kwenziwa kusetshenziswa spatula ezivamile noma umshanelo, okuyinto egxilile ikhambi, bese u- ke obondeni, "nashlepyvayut" ungqimba usimende. ebusweni okuhlobisa futhi kudala ezinamasondo ekhethekile Embossed, okuyinto eyenziwa ezimanzi usimende odongeni, enika ukuthungwa enamathela yasekuqaleni.
Liquid ukwahlukanisa: ukubuyekeza nezincomo
Ukudweba Metal Hammer: abakhiqizi, izinhlobo, isicelo
Usayizi plasterboard ishidi - esibalulekile ukukhanda
Indlela ukukhetha ukwahlukanisa for amapayipi amanzi? Sibutsetelo abakhiqizi futhi imiyalelo yokufaka
Ukubuyiselwa uphawu lapho ukwahlukanisa umnyango
Uphahla lwangaphakathi lokuhweba eyenziwe plasterboard: Modern, enhle, inzuzo
Artichoke: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka, futhi izakhiwo kilojoule, indlela yokutshala nande
Diablo 3 - Gameplay kanye nezindali Diablo 3 Igolide for imali yangempela.
Ukwelashwa ngaphandle kokuhlinzwa cholelithiasis: Kungenzeka, kodwa into evamile
Ukwelashwa ezinso amakhambi abantu
Izilinganiso ngokuphila okuhle - lokhu akukona umbhedesho kodwa umhlahlandlela
Inhlokodolobha esenyakatho Greece - Thessaloniki. Izikhangibavakashi & Izindawo
Yiluphi ulimi izinhlelo ukukhetha saqala ukufunda
Vitamin izithelo nemifino. Yikuphi imifino nezithelo aqukethe amavithamini B1, B6, B12?
Yini umbala kufanele imali esikhwameni ukuze kopilas kokubili ezinkulu nezincane?
Lasesihlakaleni ngokuhlanganyela: kuyinsakavukela pathology
I-Laptop Thuthukisa: ekuthuthukiseni ukusebenza kohlelo ukupholisa
Pepper Sweet - imbewu izinhlobonhlobo engcono